दशगजामा ढलेका सीमास्तम्भ उठेन - NewsCenterNepal.com
नेपाल भारत सिमाना दशगाजमा ढलेका सीमास्तम्भ निर्माणमा अन्योलता देखिएको छ । २०७६ सालको असार २८ गते आएको बाढीले दशगजाका आधा दर्जन सिमास्तम्भ ढलेका थिए । एक बर्ष पहिले बर्षाको आएको बाढीले कपिलवस्तुको बिजयनगर गाँउपालिका–५ चिरई खोलाका ४ वटा सीमास्तम्भ ढलेका हुन ।
विजयनगर गाउँपालिका–५, ठकुरापुर र भारतको बलरामपुर जिल्ला गिद्धहवा सीमामा रहेको पिलर नं ५७८, ७ र त्यसको आदि कि.मि. उत्तर पिलर नं. ५७८, १० पानीमा लडेको छ । गाउपालिकाको वार्ड नं ६ गेडुवाजोत र भारतको प्रतापपुरको सीमा रहेको पिलर नं ५७७,७ र ५७७,९ ढलेका छन् । ५७७,९ नम्बरको पिलर तेस्रो परेर वालुवामा धसिएको छ, भने ५७७, ७ पानीमा डुबेर हराएको छ ।
सीमास्तम्भ ढलेको बर्ष बित्दासमेत सीमा स्तम्भको निर्माणका लागि नेपाल सरकारबाट कुनै पहल नभएको स्थानीय पत्रकार राम प्रघट कोरीले बताउनु भयो । सीमास्तम्भ निर्माणका लागि नेपाल र भारतबीचको केन्द्रीयस्तरको सर्वेक्षक सहितको प्राविधिक टोली सर्बे गरेपनि निर्माण गर्ने तर्फ कुनै पहल नभएको पत्रकार कोरीले बताउनु भयो ।
ढलेको सीमास्तम्भ शसस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीले सीमा स्तम्भको निगरानी गर्दै आएको छ । कपिलवस्तु जिल्लासँग भारतको उत्तर प्रदेशको सिद्धार्थनगर र बलरामपुर जिल्ला जोडिएका छन । दुई देशका सीमामा ४६ मुख्य सीमास्तम्भ, २ सय २६ सहायक सीमा स्तम्भ र २ सय ६० साना सीमा स्तम्भ गरी कुल ५ सय ३२ सीमा स्तम्भ रहेका छन ।
बिद्यार्थी बोकेको बस दुर्घटनाग्रस्त, १३ जनाको ज्यान गयो